Madaxweyne Farmaajo oo shalay magacaabay xilalkii ugu horeeyay ee Qaranka Soomaaliya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo shalay magacaabay xilalkii ugu horeeyay ee Qaranka Soomaaliya
Madaxweyne Maxamed C/laahi Farmaajo oo maalintii shalay si rasmi ah xilka ula wareegay ayaa durbadiiba soo magacaabay xilalkii ugu horeeyay ee xubnaha ka mid noqon doonna kooxda ay isla shaqeyn doonaan mudada 4-ta sano ee soo socota.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xilka agaasimaha KMG ah ee madaxtooyada Soomaaliya u magacaabay safiirka Soomaaliya u fadhiyay Midowga Yurub iyo Biljamka Dr. Cali Siciid Fiqi, kaas oo la sheegayo inuu ka mid ahaa shaqsiyaadka sida weyn uga qeyb qaatay ololihiisa doorasho.
Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo ayaa la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka u magacaabay Xuseen Macalin Maxamuud, oo dowladii Xasan Sheekh ka ahaa xoghayaha guddiga amniga qaranka.
Xuseen ayaa la sheegayaa inuu horey usoo noqday la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynayaashii ka horeeyey Farmaajo, wuxuuna sidoo kale ahaa sarkaal ka tirsan hayadda nabad-sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA, waana nin heysta dhalashada dalka Britain.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale Siyaad Maxamuud Shire u magacaabay xilka madaxa baratakoolka iyo hab maamuuska madaxtooyada Soomaaliya.
Siyaad Maxamuud Shire ayaa inta aan xilka loo magacaabin kahor wuxuu ahaa qunsulkii safaarada Soomaaliya u fadhiyay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Carabiya, wuxuuna sidoo kale hore u ahaa qunsulkii safaarada Soomaaliya u fadhiyay magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Dhinaca kale, maalmaha soo socdo ayaa la filayaa in madaxweyne Farmaajo uu sidoo kale soo magacaabo mas’uuliyiin cusub oo ka howlgali doonna waaxyaha madaxtooyada Soomaaliya.
Madaxweynaha Farmaajo ayaa sidoo kale laga sugayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo magacaabo ra’iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya, kaas oo isna soo dhisi doonna xukuumad tayo leh oo shaqeyn doonta 4-ta sano ee soo socota.
Xukuumadda cusub ayaa laga doonayaa inay noqoto mid la dagaalanta musuq-maasuqa hareeyay hayadaha dowladda, islamarkaana xooga saarto sugidda ammaanka dalka iyo xoojinta hanaanka dowladnimo.